ရုရှား-ယူကရိန်းစစ် ရက်တရာပြည့် ယူကရိန်းအရှေ့ခြမ်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်
FILE PHOTO: Russia's invasion of Ukraine continues, in Sievierodonetsk
ရုရှား-ယူကရိန်းစစ် ရက် (၁၀၀) ပြည့်ချိန်၊ ယူကရိန်းအရှေ့ ပိုင်း တိုက်ပွဲပြင်းနေပြီး နှစ်ဘက်လုံးက သူတို့နိုင်နေပြီလို့ အပြိုင်ကြုံးဝါးလိုက်ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်း Luhansk ပြည်နယ် အဓိက မြိုံ့ ကြီး နှစ်ခုမှာ ဝိုင်းထားတာနဲ့ ပြန်တိုက်ထုတ်တာတွေ၊ အပြန်အလှန် ဖြစ်နေချိန်မှာ ရုရှားပြောခွင့်ရနဲ့ ယူကရိန်း ပြည်နယ်အကြီးအကဲ နှစ်ဦးလုံးက အခုလို တပြိုင်တည်း ဟစ်ကြွေးလိုက်တာပါ။
ရုရှားအစိုးရ ပြောခွင့်ရ Dmitry Peskov က သူတို့ အဓိကတာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ ယူကရိန်းအရှေ့ ပိုင်း ခွဲထွက်ရေးသမားတွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသက အရပ်သားတွေကို အကာအကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်း အောင်မြင်သွားပါပြီလို့ မနေ့ကပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လွတ်မြောက်အောင် ရုရှားတပ်တွေက စွမ်းဆောင်ပေးလိုက်ပြီး၊ ဒီ ရုရှားအထူးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်တဲ့အထိ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ရုရှားပြောခွင့်ရက ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
Luhansk ပြည်နယ် မြို့ ကြီးး Sievierodonestsk နဲ့ Lysyshansk တွေကို ရုရှားက ဝိုင်းထားဖို့ ဆက်လုံးပန်းနေချိန်၊ ယူကရိန်းရဲ့ Luhansk ပြည်နယ်အကြီးအကဲ Serhiy Gaidai ကလည်း Sievierodonetsk မြို. နယ်မြေကြီးတစ်ခုကို ပြန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ မနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ယူကရိန်းတပ်တွေအနေနဲ့ ဒီဒေသက သိမ်းပိုက်ခံနယ်မြေ (၂၀)% ကို ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ရုရှားတပ်တွေ အားသာနေတဲ့ လက်နက်ကြီးအင်အားကို၊ အနောက်ကလာမဲ့ တာဝေးပစ်ဒုံးတွေရတာနဲ့ ပြန်တွန်းလှန်နိုင်မှာပါလို့ Luhansk ပြည်နယ် အကြီးအကဲက ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရုရှား-ယူကရိနျးစဈ ရကျ (၁၀၀) ပွညျ့ခြိနျ၊ ယူကရိနျးအရှပေို့ငျး တိုကျပှဲပွငျးနပွေီး နှဈဘကျလုံးက သူတို့နိုငျနပွေီလို့ အပွိုငျကွုံးဝါးလိုကျပါတယျ။
ယူကရိနျးနိုငျငံအရှပေို့ငျး Luhansk ပွညျနယျ အဓိက မွိုံ့ကွီး နှဈခုမှာ ဝိုငျးထားတာနဲ့ ပွနျတိုကျထုတျတာတှေ၊ အပွနျအလှနျ ဖွဈနခြေိနျမှာ ရုရှားပွောခှငျ့ရနဲ့ ယူကရိနျး ပွညျနယျအကွီးအကဲ နှဈဦးလုံးက အခုလို တပွိုငျတညျး ဟဈကွှေးလိုကျတာပါ။
ရုရှားအစိုးရ ပွောခှငျ့ရ Dmitry Peskov က သူတို့ အဓိကတာဝနျကွီးဖွဈတဲ့ ယူကရိနျးအရှပေို့ငျး ခှဲထှကျရေးသမားတှေ ထိနျးခြုပျထားတဲ့ဒသေက အရပျသားတှကေို အကာအကှယျပေးရေးလုပျငနျး အောငျမွငျသှားပါပွီလို့ မနကေ့ပဲ ပွောလိုကျပါတယျ။
ယူကရိနျးနိုငျငံ အစိတျအပိုငျးတှကေို လှတျမွောကျအောငျ ရုရှားတပျတှကေ စှမျးဆောငျပေးလိုကျပွီး၊ ဒီ ရုရှားအထူးစဈဆငျရေးလုပျငနျးကို အောငျမွငျတဲ့အထိ ဆကျလုပျသှားမယျလို့ ရုရှားပွောခှငျ့ရက ဆကျပွောခဲ့ပါတယျ။
Luhansk ပွညျနယျ မွို့ကွီးး Sievierodonestsk နဲ့ Lysyshansk တှကေို ရုရှားက ဝိုငျးထားဖို့ ဆကျလုံးပနျးနခြေိနျ၊ ယူကရိနျးရဲ့ Luhansk ပွညျနယျအကွီးအကဲ Serhiy Gaidai ကလညျး Sievierodonetsk မွို. နယျမွကွေီးတဈခုကို ပွနျသိမျးနိုငျခဲ့ပွီလို့ မနကေ့ ပွောလိုကျပါတယျ။
ယူကရိနျးတပျတှအေနနေဲ့ ဒီဒသေက သိမျးပိုကျခံနယျမွေ (၂၀)% ကို ပွနျသိမျးယူနိုငျခဲ့ပွီး၊ ရုရှားတပျတှေ အားသာနတေဲ့ လကျနကျကွီးအငျအားကို၊ အနောကျကလာမဲ့ တာဝေးပဈဒုံးတှရေတာနဲ့ ပွနျတှနျးလှနျနိုငျမှာပါလို့ Luhansk ပွညျနယျ အကွီးအကဲက ဆကျပွောခဲ့ပါတယျ။